Flor Medical dia nanao fisehoana mahavariana tao amin'ny Fair International Medical Equipment International (CMEF) faha-83.
amin'ny alàlan'ny admin amin'ny 21-04-10
Tamin'ny 19 Oktobra 2020, ny fampirantiana ny International International Equipment Equipment Medical (CMEF) faha-83 sy ny fampirantiana ny teknolojia famokarana teknolojia manerantany (ICMD) faha-30 dia nanokatra tamim-pahibemaso tao amin'ny National Convention and Exhibition Center Shanghai. Nanomboka ny taona 1979 ny CMEF ary nanampy ...
Jiangxi Flor dia nahazo ny anaram-boninahitra "Vondrona avaratry ny rafitra indostrialy sy ny informatika hiadiana amin'ny pnemonia coronary vaovao"
amin'ny alàlan'ny admin amin'ny 21-01-14
Tamin'ny alàlan'ny fankatoavan'ny governemanta foibe, ny Minisiteran'ny Indostria sy ny haitao fampahalalana vao haingana dia nidera andiana antokon'olona mandroso sy olona efa mandroso izay nipoitra tamin'ny ady tamin'ny areti-tratra pnemonia. Jiangxi Flor no nandresy tamin'ny hono ...
Flor Medical & Hebei Ping Vondrona fahasalamana "Fiofanana momba ny rivotra ary fiasa miasa, fikolokoloana" fikolokoloana
Tamin'ny 29 Oktobra dia nandray anjara tamin'ny fizotrany rehetra i Jiangxi Flor mba hanazavana ny kaonferansa fiofanana "Ventilator Mechanical Ventilation, Operation Operation ary Maintenance" notontosain'ny Hebei Ping An Health Group. Ny toerana tena lehibe tamin'ity fihaonambe horonantsary ity dia tao Shijiaz ...